Mmadụ Inwe égbè Ọ Ga-eji Na-echebe Onwe Ya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Onye Kraịst ò kwesịrị inwe ụdị égbè ọ bụla ọ ga-eji na-echebe onwe ya maka ndị ọjọọ?
Ọ bụ eziokwu na Ndị Kraịst nwere ike ịgbalịsi ike ka ha chebe onwe ha, o kwesịghị ime ka ha mebie iwu Baịbụl. Baịbụl gwara anyị ka anyị ghara iji ụdị égbè ọ bụla ma ọ bụ ngwá ọgụ ọzọ chebe onwe anyị maka ndị ọjọọ. Chegodị banyere ihe ndị a:
Ndụ dị nsọ n’anya Jehova, nke ka nke, ndụ ndị mmadụ. Ọbụ abụ bụ́ Devid ma na ọ bụ Jehova “bụ isi iyi nke ndụ.” (Ọma 36:⁠9) N’ihi ya, ọ bụrụ na Onye Kraịst ekpebie ime ihe ụfọdụ iji chebe onwe ya ma ọ bụ akụ̀ ya, ọ ga-agbalịsi ike ka ọ ghara igbu mmadụ, ka ọbara mmadụ ghara ịdị ya n’isi.​—⁠Diut. 22:8; Ọma 51:⁠14.
Ọ bụ eziokwu na mmadụ iji ihe ọ bụla echebe onwe ya nwere ike ime ka o gbuo ọchụ, égbè na-eme ka igbu mmadụ dị mfe, ma onye ahụ ọ̀ kpachaara anya ma ọ̀ bụ n’ọghọm. * Ihe ọzọ bụ na onye omekome bịa, o nwere ike ịbụ na ahụ́ erughị ya ala. N’ihi ya, ọ hụ na onye ọ bịakwutere nwere égbè, ihe nwere ike ịka njọ. E nwekwara ike igbu mmadụ.
Mgbe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha were mma agha n’abalị bọtara ụbọchị ọ nwụrụ, o bughị n’obi ka ha jiri ya chebe onwe ha. (Luk 22:​36, 38) Kama, ihe mere o ji sị ha weta mma agha bụ ka ọ kụziere ha ka ha ghara ịlụ ọgụ, ọ bụrụgodị na ìgwè mmadụ iwe ji eburu ngwá ọgụ bịa. (Luk 22:52) Mgbe Pita ji otu n’ime mma agha ahụ gbupụ ohu nnukwu onye nchụàjà ntị, Jizọs sịrị ya: “Mịghachi mma agha gị n’ọbọ ya.” Jizọs kwuziri otu eziokwu gbara ọkpụrụkpụ, nke mere ka ndị na-eso ụzọ ya mara ihe ha kwesịrị ime ruokwa n’oge anyị a. Ọ sịrị: “Ndị niile na-eji mma agha ga-ala n’iyi site ná mma agha.”​—⁠Mat. 26:​51, 52.
Ndị Chineke ‘na-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè, kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ mma ịkwa osisi’ otú ahụ Maịka 4:3 kwuru. Ihe a e ji mara ezigbo Ndị Kraịst dabara adaba n’ihe Pọl onyeozi si n’ike mmụọ nsọ kwuo ka anyị na-eme. Ọ sịrị: “Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ. . . . Ọ bụrụ na o kwere omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile dịrị n’udo.” (Rom 12:​17, 18) Pọl mere ihe a o kwuru n’agbanyeghị ọtụtụ nsogbu bịaara ya, ma ‘ihe ize ndụ si n’aka ndị na-apụnara mmadụ ihe.’ Ichebe onwe ya adịghị ya mkpa karịa ime ihe Baịbụl kwuru. (2 Kọr. 11:26) Kama, ọ tụkwasịrị Chineke na amamihe dị n’Okwu ya obi. Ụdị amamihe ahụ “dị mma karịa ngwá ọgụ.”​—⁠Ekli. 9:⁠18.
Ndị Kraịst ji ndụ kpọrọ ihe karịa ihe onwunwe. “Ihe [mmadụ] nwere adịghị eme ka ọ dị ndụ.” (Luk 12:15) N’ihi ya, ezigbo Ndị Kraịst na-eme ihe Jizọs kwuru ma ọ bụrụ na olu ọma ha ji gwa onye oji égbè ezu okwu emeghị ka ọ kwụsị inye ha nsogbu. Jizọs sịrị: “Emegwarala onye bụ́ ajọ mmadụ ihe o mere gị.” O nwedịrị ike ịpụta na anyị ga-enye onye ahụ uwe ime anyị na uwe elu anyị otú ahụ Jizọs kwuru. (Mat. 5:​39, 40; Luk 6:29) * Ma, mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na anyị anaghị eme ‘oké ngosi nke ihe anyị ji ebi ndụ,’ meekwa ka ndị agbata obi anyị mata na anyị bụ Ndịàmà Jehova na-eme udo, o nwere ike ime ka ndị omekome ndị na-eme tigbuo zọgbuo ghara ịchọrọ anyị bịa.​—⁠1 Jọn 2:16; Ilu 18:⁠10.
Ndị Kraịst anaghị eme ihe ga-enye akọnuche ndị ọzọ nsogbu. (Rom 14:21) Ụmụnna mata na nwanna nwere égbè o ji echebe onwe ya maka ndị ọjọọ, o nwere ike ịwụ ụfọdụ n’ime ha akpata oyi n’ahụ́ ma ọ bụdị mee ka ha sụọ ngọngọ. Ịhụnanya na-eme ka anyị mee ihe ga-adị ndị ọzọ mma, kama ichewe naanị maka onwe anyị, ọ bụrụgodị na ọ pụtara na anyị ga-ahapụ ihe anyị weere ka ihe ruuru anyị.​—⁠1 Kọr. 10:​32, 33; 13:​4, 5.
Ndị Kraịst na-agbasi mbọ ike ka ha bụrụ ndị e ji ama atụ. (2 Kọr. 4:2; 1 Pita 5:​2, 3) A gwachaa Onye Kraịst ihe Baịbụl kwuru, ya aka nwee égbè o ji echebe onwe ya maka ndị ọjọọ, a gaghịzi ewere onye ahụ ka onye e ji ama atụ. N’ihi ya, ọ gaghị eru eru ịrụ ọrụ ma ọ bụ inwe ihe ùgwù pụrụ iche n’ọgbakọ. Otú ahụ ka ọ dịkwa Onye Kraịst nke na-arụ ọrụ na-eme ka ọ na-ebu égbè. Ọ ga-akara ya mma ịchọrọ ọrụ ọzọ. *
O doro anya na Onye Kraịst ga-eji aka ya kpebie otú ọ ga-esi na-echebe onwe ya, ezinụlọ ya, ma ọ bụ akụ̀ ya, nakwa ụdị ọrụ ọ ga na-arụ. Ma, ihe Baịbụl kwuru na-egosi na Chineke ma ihe, hụkwa anyị n’anya. Ndị Kraịst ṅụjuru mmiri ara afọ na-akwanyere ihe Baịbụl kwuru ùgwù. N’ihi ya, ha na-ekpebi na ha agaghị enwe égbè ha ga-eji na-echebe onwe ha maka ndị ọjọọ. Ha ma na ha tụkwasị Chineke obi, na-emekwa ihe Baịbụl kwuru, Chineke ga-echebe ha, meekwa ka ha nweta ndụ ebighị ebi.​—⁠Ọma 97:10; Ilu 1:33; 2:​6, 7.
N’oké mkpagbu ahụ, Ndị Kraịst ga-atụkwasị Jehova obi. Ha agaghị agbalịwa ichebe onwe ha
^ para. 3 Onye Kraịst nwere ike ikpebi inwe égbè ọ ga-eji na-egbute anụ ma ọ bụ nke ọ ga-eji na-echebe onwe ya ka anụ ọhịa ghara imerụ ya ahụ́. Ma, mgbe ọ na-enweghị ihe e ji ya eme, ọ ga-akacha mma ka e wepụ mgbọ dị na ya, ma ọ bụdị tụkasịa ya ma dewe ya n’ebe a kpọchiri akpọchi. Ọ bụrụ na a machibidoro égbè iwu n’obodo ma ọ bụ na e nyere iwu ụfọdụ gbasara ya, Ndị Kraịst na-erubere iwu ahụ isi.​—⁠Rom 13:⁠1.
^ para. 2 Ị chọọ ịhụ ebe e kwuru gbasara mmadụ ichebe onwe ya ka a ghara idina ya n’ike, gụọ isiokwu bụ́ “Ụzọ A Pụrụ Isi Gbochie Ndina n’Ike,” nke gbara na Teta! July 8, 1993.
^ para. 4 Ị chọọ ịhụ ebe a kọwakwuru ihe gbasara mmadụ ịrụ ọrụ ga-eme ka ọ na-ebu égbè, gụọ Ụlọ Nche November 1, 2005, peeji nke 31; na nke January 15, 1984, peeji nke 25 ruo 26.
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ​—⁠Febụwarị 2017